कमल थापामाथि आरोप लगाउँदै पशुपतिशमशेरले राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्रबारे मुख खोले « रिपोर्टर्स नेपाल
कमल थापामाथि आरोप लगाउँदै पशुपतिशमशेरले राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्रबारे मुख खोले
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी किन फुट्यो भन्ने कुरा सबैको चासोको विषय बनेको छ । करिब ८ महिनाअघि एकता गरेका कमल थापा र पशुपतिशमशेर राणाबिच अहिले पानी बाराबारको स्थिती छ । एक अर्कालाई आरोप लगाएर आफु ठीक छु भन्ने दौडमा थापा र राणा देखिएका छन् । कमल थापाले राणालाई धेरै आरोप पनि लगाएका छन् । राप्रपा विभाजन हुनुको खास कारण के हो त ? यही कुरा खोतल्ने प्रयास ऋषि धमलाले गर्नुभएको छ । राप्रपाबाट अलग्गिएर राप्रपा प्रजातान्त्रिक पार्टी दर्ता गराउनुभएका नेता पशुपति शमशेर जबरासँग धमलाले विशेष कुराकानी गर्नुभएको छ । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको अन्तरवार्ता यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
तपाईहरु शेरबहादुर नेतृत्वको सरकारमा जाने तयारीमा हो ?
अहिले सरकारमा जाने विषयमा कुरा भएको छैन । त्यस्तो केही तयारी पनि छैन । हामीले सरकारलाई समर्थन चाँही गरेका छौँ । सरकारमा जाने विषयको चाँही ठेगान भएको छैन ।
सरकारमा जानकै लागि पार्टी फुटाउनुभएको भन्ने आरोप कमल थापाले लगाएका छन् । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
उहाँले केके आरोप लगाउनुहुन्छ, त्यसको कुनै अर्थ छैन । उहाँलाई ठूलो चोट परेको छ । त्यसैले उहाँले जे पायो त्यही बोल्नुहुन्छ ।
पार्टी त फुटाउनुभयो । तर तपाईसँग ४० प्रतिशत हिस्सा छैन भनेर कमल थापाले चुनौति दिइरहेका छन् । अब के गर्नुहुन्छ ?
मसँग के बल छ, त्यो प्रमाणित गरिदिन्छु । निर्वाचन आयोगमा चाहिने संख्या हामी पु¥याउँछौँ ।
सात जना त केन्द्रिय सदस्य नै नभएकाको हस्ताक्षर गराउनुभएको रैछ नि ?
यो सरासर गलत कुरा हो । हावा कुरा गरिराछन् । निर्वाचन आयोगमा लगेको हस्ताक्षर कसैले किर्ते गर्छ ? संसारमै नभएको कुरा, कमल थापाले कल्पना गर्ने कुरा होला, म त सोच्दा पनि सोच्दिन ।
कमल थापाले भन्नुभएको छ नि ?
कमल थापाले झुटो कुरा गर्नुभएको हो । नचाहिने कुरा गरेर हुन्छ ? हामीसँग चालिस प्रतिशत पुगेको छ । उहाँको आरोप फटाहा कुरा हो ।
कमल थापाले त ४० प्रतिशत केन्द्रिय सदस्यको समर्थन नरहेको हुँदा पार्टी दर्ता खारेज गर्न माग गर्नुभएको छ ।
उहाँको यो कुरा निराधार र कपोकल्पित छ । उसको काम नै यस्तै निराधार कुरा गर्दै हिँड्ने हो । ठूलो चोट लागेको हुनाले यस्ता कुरा गरिएको हो ।
तपाईसँग अहिले कति जना सासंद छन् ?
अहिलेको अवस्थामा १९ जना सासंद मसँग छन् ।
सबैलाई मन्त्री बनाइदिन्छु भनेर ल्याउनुभएको हो ?
हामीले कसैलाई मन्त्रीको लोभ देखाउनै पर्दैन ।
पार्टी फुटाउनुपर्ने कारण चाँही के हो ?
पहिलो कुरा, अहिले जुन ढंगले उहाँले पार्टी संचालन गर्नुभयो, त्यसबाट चिढिएका मन्छे धेरै छन् । केही भन्नै पर्दैन, त्यसै आइरहेका छन् । कमल थापाको नेतृत्वमा पार्टीले स्थानीय निकायको चुनावमा लज्जास्पद हार बेहो¥यो । हारको जिम्मेवारी पनि उहाँले लिन चाहनुभएन । कतिपय साथीहरु स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा चुनाव लड्नुपर्ने अवस्था आयो । दोस्रो कुरा, आधारभूत सम्झौता अनुसार पार्टी सचालन भएन । लोकेन्द्र बहादुर चन्द, कमल थापा र मबिचमा सबै कुरामा सल्लाह गरेर मात्रै निर्णय गर्ने भनिएको थियो । त्यसो गरिएन । तेस्रो कुरा, हलोलाई हाम्रो चुनाव चिन्ह बनाउने सम्झौता थियो । त्यसको विपरित गाईलाई बनाइयो । यि कुराहरुले गर्दा पार्टी फुटाइएको हो । पार्टीलाई जोगाउनका लागि यो कदम चालिएको हो ।
तपाईले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन नदिने चलखेल गर्नुभएको आरोप पनि कमल थापाले लगाएका छन् । खास कुरा के हो ?
यो सरासर गलत र कपोकल्पित कुरा हो । उहाँले हारको चोटमा यस्तो कुरा गर्नुभएको हो । हामी हिन्दुराष्ट्रको पक्षधर नै हौँ ।
तपाईहरु अब गणतन्त्रवादी हो ?
यो मुलुक पृथ्वीनारायण शाहले नबनाएको भए बन्दै नबन्ने मुलुक हो । त्यसैले राजसंस्थाप्रति मेरो श्रद्धा छ । यो विषयमा पार्टीभित्र बहस जारी छ ।
अब तपाईहरुले जनमत लिन सक्नुहुन्छ त ?
हामी अब नयाँ पहलका साथ अगाढि बढ्छौँ । प्रजातन्त्रको संरक्षण गर्न अगाडि बढेको पार्टी हो । प्रजातान्त्रिक पार्टीहरुसँग मिलेर अघि बढ्छौँ ।
नेपाली कांग्रेससँग आगामी चुनावमा तालमेल गर्ने हो ?
त्यसमा हाम्रो पहल हुनेछ । भोली गएर के हुन्छ त्यो आफ्नै ठाउँमा छ । वृहत प्रजातान्त्रिक एकताको कुरा हामीले गरेका छौँ ।
संविधान संशोधनका लागि तपाईहरु सकरात्मक भूमिकामा देखिने हो ?
त्यस विषयमा हामी छलफल गर्दैछौँ ।
तपाईले सासंद किन्नुभयो रे । केन्द्रिय सदस्यलाई १० लाख रुपैयाँ दिएर ल्याउनुभयो भन्ने आरोप छ नि ?
हार्ने मान्छेको रन्थनिएको बोली हो । मैले कसैलाई पनि किनेको छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र समेत पार्टी फुटाउन लागेको आशंका गरिएको छ नि ?
फाल्टु कुरा गरेर हिँड्छन् ।
कमल थापाले यस्तो आरोप किन लगाउनुभयो त ?
यो कुन ठूलो कुरा हो र ? जुन ढंगबाट उहाँको तर्फबाट पार्टी संचालन भयो, त्यसबाट स्वतः स्फुर्त रुपमा पार्टीभित्र चिन्ता र असन्तुष्टी थियो । ६ वटा प्रदेशको स्थानीय तहको चुनावमा लज्जास्पद हार भयो । त्यसबाट धेरै मान्छे चिन्तित छन् । त्यसैले पार्टीभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टीको नतिजा हो । त्यसैले कमल थापाले केके गल्ती गरेँ भन्ने कुराको आत्मसमिक्षा गर्नुपर्छ ।
सभामुखले आत्मालोचना नगरी संसद् खुल्दैनः एमाले प्रमुख सचेतक भट्टराई
काठमाडौं, कात्तिक २ । नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफ्नो
संस्थापन इतर पक्षका थुप्रै नेताहरू अन्तिम अवस्थामा देउवासँगै आउनेछन्ः मोहन बस्नेत
काठमाडौं, कात्तिक १ । नेपाली कांग्रेसको नेता मोहनबहादुर बस्नेतले शेरबहादुर देउवा पार्टीमा उपलब्ध भएमध्येको बलियो,लचिलो
हाम्रो सभापतिले व्यवस्थालाई भन्दापनि सत्तालाई महत्व दिनुभयो : रामचन्द्र पौडेल (भिडिओसहित)
काठमाडौं, २९ असोज । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अहिलेका नेताहरु व्यवस्थालाई भन्दापनि सत्तालाई
देउवाको विश्वासपात्र नै म हुँ, म योग्य र सक्षम व्यक्ति हुँ : गोपालमान श्रेष्ठ (भिडिओसहित)
काठमाडौं, २७ असोज । नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले आफू सुरुदेखि
जनताको मन जित्नेगरि काम गर्छु : मन्त्री दोबाटे (भिडिओसहित)
काठमाडौं, २७ असोज । गण्डकी प्रदेशका विना विभागीय मन्त्री दोबाटे विश्वकर्माले आफूलाई मन्त्री बनाउनको लागि
नेकपा (एमाले) का प्रभावशाली नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले माधव कुमार नेपाललाइ कम्युनिष्टको नाममा
नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले केही महिनाभित्र शतप्रतिशत जनसंख्यामा खोप पुर्याउने दाबी गरेका छन्